ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်က ပိတ်ရက် ၅ ရက်တောင် ပိတ်မှာဆိုတော့ ခရီးသွားကြမယ့် သူတွေကတော့ တစ်လကြိုလောက်ကတည်းက စီစဉ်နေကြပေမယ့် ဟိုတယ်အခန်းမရတာ၊ ကားလက်မှတ်မရတွေနဲ့ စိတ်တွေလည်း ကသိကအောက်ဖြစ်နေကြလောက်ပါပြီ။ တချို့လည်း…
မိုးရာသီမှာ ခရီးသွားတာ အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာထက် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာရဲ့ ရာသီဥတုကို လေ့လာထားတာ ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီဥတုကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆို ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး…
လူကုန်ထံတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက် အပိုင်း ၁
UK နိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင် London မြို့က သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ အလှပဆုံးနေရာတစ်ခုဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒီမြို့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ၊ သူမတူတဲ့ သမိုင်းတွေ၊ ဗြိတိန်ယဉ်ကျေးမှုကို ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းထားတဲ့ မြို့ပါ။ ပြီးတော့…
လူတော်တော်များများဟာ ခရီးထွက်တာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ခရီးထွက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်နေရာက လစ်ဟာသွားတာနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင် ခရီးစဉ်အစမှအဆုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေဖို့အတွက်က ကြိုတင်စီစဉ်သင့်တဲ့အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) Location…
ကမ္ဘာအနှံမှာ ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ ခရီးသွားဖူးတဲ့သူတွေ သိကြမှာပါ။ နဂါးပွတ်အိုင်၊ ရေပူစမ်း၊ ကျိုက်ထီးရိုးဆံတော်ရှင်၊ ဆွမ်းဦးပုညရှင် စတဲ့ အထင်ကရနေရာတွေဟာ ထူးဆန်းတဲ့ တန်းခိုးကြီးဘုရားတွေနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေပါပဲ။
ကားပိတ်နေချိန်မှာ အကျိုးရှိအောင် ဘာတွေလုပ်မလဲ ?
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ ကားပိတ်ခြင်းကိစ္စကို နိစ္စဒူဝတွေ့ကြုံနေရပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ မိမိအတွက် အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကားပိတ်လို့စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ အချိန်တွေကို အလဟဿမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကဲ . .…
အထာကျကျ YBS စီးမယ်
တစ်နေ့တစ်နေ့ လမ်းမထက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ပိုင်ကား၊ Taxiစီးတဲ့သူတွေထက် YBS စီးတဲ့ ခရီးသည်တွေကပိုများပါတယ်။ ပြည်သူအများစုစီးနင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပြေစီးနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း အထာနပ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ သွားချင်တဲ့ခရီးကို ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်တော့မှာပေါ့။
သင့်ရဲ့အားလပ်ရပ်မှာ မိသားစုနဲ့ အချိန်ကုန်ဖို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်မယ်ဆို နွေးနွေးထွေးထွေးရှိလှတဲ့ ကမ်းခြေကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကမ်းခြေကိုခရီးထွက်ဖို့ ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
Aokigahara သို့မဟုတ် Suicide Forest
Aokigahara ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ပြင်လောက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ သစ်တောကြီးကို ကြားဖူးကြရဲ့လား။ ဒီသစ်တောကြီးက ဂျပန်ရဲ့ နာမည်ကြီး Fuji တောင်ကြီးရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက် ၃၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ အကွာမှာ…
ဘန်ကောက်က Mustang Nero
Bangkok မှာအမြဲသွားလည်ဖြစ်ပြီး သာမှန်ရိုးကျ ဟိုတယ်တွေမှာတည်းရတာပျင်းနေပြီလား Facebook, Instagram မှာသူများနဲ့မတူတဲ့ ပုံအဆန်းကြီးတွေတင်ချင်လား ဒါဆိုရင် Mustang Nero ကသင့်အတွက်ဘဲ။